जवान र सु’न्दर बन्न मन छ ? बढाउनुहो’स् भिटामि’न ईको मात्र – NepalajaMedia
जवान र सु’न्दर बन्न मन छ ? बढाउनुहो’स् भिटामि’न ईको मात्र
January 22, 2021 138
भि’टामिन फैक्टयुक्त भिटामिन हो, जुन विभिन्न खानाबाट पाइन्छ । श’रीरका को’षिकाको पुननिर्माण, रक्त सञ्चार सूचारु, मु’टु तथा मांसपेश बलियो बनाउन, तथा छा’लाको लागि यो उपयोगी मानिन्छ । स्वा’स्थ्य तथा सौन्दर्यका दृष्टिकोणले पनि निकै उपयोगी भिटामिन ‘ई’ फलफूल, पत्तावाल सागपात, तेल, ड्राई फ्रुट लगायतमा पाइन्छ ।
क्लिन्जर: भिटामिन ईको प्रयोग कयौ प्रकारका सौन्दर्यका प्रसाधनहरुमा गरिन्छ । यसले छा’लाका विकार, फोहर तथा मृत कोषिकाहरुलाई सफा गर्ने हुदाँ यसलाई गुणस्तरीय क्लिन्जर पनि भन्ने गरिन्छ। एन्टीएजिङ: भिटामिन ईमा भरपूरमात्रामा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ , जसले उ’मेरका कारण अनुहारमा हुने असरलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै, यसले चाउरीपना कम गर्न तथा रो’क्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गर्छ ।
विकरणबाट बचाउँछ: सुर्यको विकिरणका कारण छा’लामा पर्ने असरबाट भिटामिन ‘ई’ ले हामीलाई बचाउँछ । साथै सर्न वर्न तथा फोटो सेंसेटिभबाट समेत भिटामिन ईले बचाउँछ । मानसिक रो’ग: एक अनुसन्धानका अनुसार भिटामिन ‘ई’को कमीका कारण मानसिक रो’गको सम्भावना बढ्ने गर्छ । भिटामिन ईको सेवनले मानसिक तनाव कम गर्न तथा अन्य स’मस्या कम गर्न मद्दत गर्छ ।
प्राकृतिक नरमपना: छा’लालाई प्राकृतिक रुपमा नरम बनाउन भिटामिन ई फाइदजनक मानिन्छ । साथै यो छा’लामा कोषिकाहरुको पुर्ननिर्माणमा समेत सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्छ । आरविसी निर्माण गर्छ: भिटामिन ‘ई’ रातो र’क्त कोषिका निर्माणको लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । गर्भावस्थाका दौरान भिटामिन ईको सेवनले एनिमिया वा रगतको कमीबाट बचाउँछ ।
हर्मोनल गडबडीमा लाभदायक: भिटामिन ‘ई’ प्राकृतिक रुपमा हर्मोन व्यालेन्स गर्नका लागि पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। शरीरमा हर्मोनल गडबडी भएमा तौल बढ्ने, एलर्जी, पिसाब थैलीको संकमण, छा’लाको स’मस्या , डर लाग्न लगातको स’मस्या निम्तने गर्दछ । भिटामिन ‘ई’ युक्त खानेकुराको सेवनले प्राकृतिक रुपमै हर्मोनल गडबडीको स’मस्या कम गरी हर्मोन व्यालेन्स गर्न मद्दत गर्छ । कसरी पाइन्छ भिटामिन ई ? भिटामिन ई हामी खानेकुराको माध्यामबाट ग्रहण गर्न सक्छौ । यसको राम्रो स्रोत भनेको एभोकाडो, हरियो सागपात, किसमिस, बदाम, ओखर, अन्डा, कांक्रा, गाजर आदिबाट पाउन सकिन्छ ।
नाकमा चिल्लो तथा का’ला वा सेता खि’ल आएर चि’न्तित हुनुभएको छ ? यी उ’पाय अपनाउनुहो’स्: सु’न्दर अनुहा’र सबैको चाहना हुन्छ । तर विविध कारणले सुन्दरतामा कमजोरी आउँछ। सु’न्दरता कमजोर गराउने कारण मध्ये नाकको बाहिर पटी छा’लामा देखिने बढी चिल्लोपना वा स-साना काला वा सेता खिल हुन् । नाकमा चिल्लो वा यस्ता खिलहरु के कारणले आउछ ? र कसरी आउन नदिने वा हटाउने ? नाक स्वा’स्थ्यका लागि मात्र हैन सौन्दर्यको लागि पनि महत्वपूर्ण अंग हो । त्यस कारण नाकको भित्री तथा बाहिरी नाक वरिपरीको छाला भाग स्व’स्थ र सफा हुनु पर्छ । नाक वरिपरीको छालामा विशेष गरेर चिल्लो, काला तथा सेता खिल आउने समस्या धेरै व्यक्तिमा हुन्छ । खिलबारे भ्रम हाम्रो समाजमा नाकमा आउने चिल्लो वा खिल बारे धेरै भ्रम छ । सानोमा बढी चिल्लो खायो वा लायो भने यस्तो हुन्छ, यसलाई निचोरेरै हटाउन सकिन्छ, भन्ने भ्रम मात्र हो । यस कारण नाक वरिपरी छालामा चिल्लो वा खिल आउँछ । १३–१४ वर्षदेखि २४–२५ वर्षको समयमा यस्तो स’मस्या बढी देखा पर्छ । कारण नाकदेखि आँखा तलको भागसम्मलाई ‘टि एरीया अफ दि फेस’ भनिन्छ ।
चिल्लोपना वा खिल आउन नदिन यसो गर्नुस्: दिनको तीन पटक सफा पानीले मुख धुने । बाहिर हिँड्दा वा दिनको एक पटक आफ्नो छा’लालाई सुहाउने गुणस्तरीय क्रिमको प्रयोग गर्ने । धुवाँ, धुलोबाट आएपछि फेसवासले मुख सफा गर्ने । बढी नै स’मस्या देखा परे हप्तामा एक चोटी स्क्रप लगाएर सफा गर्ने । सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने । अरुले भनेको भरमा बजारमा पाइने जुन सुकै क्रिमको प्रयोग वा जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने । यदि धेरै स’मस्या आयो भने चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम आौषधि सेवन वा अन्य तरिका अपनाउनु पर्छ ।
Prevमहिलाजस्तै पुरुषलाई पनि महिनावारी हुने गरेको खुलासा, यस्ता लक्षण देखिन्छन्